Ny fitsidihan'ny mpanjifa ny fitsidihana an'i Guanyu dia mino foana fa ny fahafaham-pon'ny mpanjifa dia manan-danja toy ny fiainana. Androany, manara-maso ny kalitaon'ny vokatra izahay ho an'ny Liqun Pharmaceuticals. Nanadihady ireo mpiasa laharana teo amin'ny tsipika famokarana izahay ary tena afa-po amin'ny boaty lozisialy novokarin'i Guanyu Gr ...
Ny boaty fanodinam-bola dia mitana andraikitra lehibe amin'ny indostrian'ny fanodinam-bola sy ny lojika. Ny boaty fanodinam-bola dia afaka miara-miasa amin'ny kaontenera sy ny toeram-piasana goavambe hanampiana ny orinasa hamita ny ankapobeny sy ny fitantanana fampidirana ireo kaontenera lozisialy ao amin'ny trano fanatobiana entana sy mpamokatra ...
Ny andraikitry ny harona plastika amin'ny lozisialy legioma
Ireo sobika fihodinana plastika avo lenta dia vita amin'ny polypropylene akora vaovao. Tsy misy poizina izy ireo ary tsy manimba ary tsy handoto ireo legioma. Diovina ara-potoana izy ireo mba hitazomana azy ireo madio ary tsy ho lasa bobongolo sy ho lo mihitsy, izay tsara kokoa noho ny volotsangana. Harona sy harona hazo ...
Mamaritra ny kalitao ve ny hatevin'ny boaty tote plastika?
Arakaraky ny hatevin'ny boaty tote plastika no mavesatra azy. Amin'ny fomba fijery ara-teknika, ny safidin'ny harona plastika dia mety miankina amin'ny hamafin'ny sy ny hateviny. Ny vokatra plastika dia be amin'ny lafiny rehetra amin'ny famokarana sy ny fiainana, saingy maro ny olona tsy mahalala ny fomba hisafidianana plastialy azo antoka ...
Tongasoa ireo mpiasa vaovao
Tamin'ny 2 Janoary 2019, ny Departemantan'ny Human Resources of Guanyu Plastics Co., Ltd. dia nanao lanonana fandraisana ireo mpiasa vaovao ao amin'ny Guanyu Group tamin'ny taona 2019. Avy amin'ny faritra samihafa izy ireo fa vonona handray anjara amin'ny Guanyu Plastics. Ny mpiasa tsirairay dia mampahafantatra ny tenany amin'ny fiteny fohy. Satria ...
Fizarana fahalalana warehousing
1．Fandaminana mety amin'ny trano fanatobiana entana Ny trano fitehirizam-bokatra dia tsy ny toerana itehirizana ny entana ihany, fa koa ny toerana anaovana ny asa fanangonana, fizarana ary fitantanana. Mba hanamorana ny firosoana tsara amin'ireto asa ireto dia tsy maintsy misy lamina mirindra. Ny warehou ...
Ny vokatra farany tsara tarehy dia manomboka amin'ny akora manta kalitao
Vao tsy ela akory izay, tratry ny fako avy any ivelany i Sina. Fako plastika be dia be no ampiasaina hanamboarana vokatra plastika isan-karazany. Tandindomin-doza ny fahasalaman'ny olona. Tao anatin'ny 20 taona lasa, Qingdao Guanyu dia nampiasa akora vaovao, fa ny vokatra mitovy amin'ny indostria dia matetika afangaro amin'ny fanodinana ...
Miarahaba an'i Qingdao Guanyu nahazo mari-boninahitra vaovao
Vao tsy ela akory izay, Qingdao Guanyu Plastic Co., Ltd. dia nomena mari-boninahitra "Integrity Enterprise" avy amin'ny sampana mifandraika amin'ny Governemanta monisipaly Qingdao, ary nanjary mpitarika an'ity tanàna ity tao amin'io orinasa io ihany. Qingdao Guanyu dia manome vahaolana ho an'ny lozisialy ara-panafody sy fivarotana ...
Ahoana ny fisafidianana tsara ny boaty lozisialy
Ny mpamokatra boaty famerenana plastika azo antoka dia matetika mampiasa fitaovana PP milamina tontolo iainana ho an'ny tontolo iainana, izay niforona tamin'ny fotoana iray tamin'ny alàlan'ny haitao mandroso mandroso. Ny tombony dia satria misy hidin-trano izy io, ary ny ao ambany kosa dia miaraka amin'ny pad anti-skid vita amin'ny rubber, izay tsy toxi ...
Ny fahasamihafana misy eo amin'ny pallet mitsoka sy ny pallet tsindrona
Ny enta-mavesatra mavesatra indrindra amin'ny palatra fanindronana dia mety hahatratra 2t, ary ny enta-mavesatra tsy miovaova dia mety hahatratra 10t. Ny fiainany fanompoana dia mety hahatratra 3 taona mahery. Noho ny lanjan'ny mavesatry ny palatra fanindronana dia mora vidy kokoa ny vidiny noho ny paletan'ny palma mitsoka, ary maro ny mpanamboatra tsy mila ny palle ...
Fanontaniana sy valiny mahazatra momba ny fitoeran-karama
1.Inona ny fitaovan'ny kaontenera fitadiavam-bola efa be mpampiasa? Ny kaontenera famerenana plastika fampiasa matetika dia vita amin'ny PP noho ny androm-piainany maharitra, ny fisehoany tsara ary ny loko mamirapiratra. 2.Inona ny fepetra takiana amin'ny fitoeran-karama? Vonona ny hamindra boaty a ...
Ny tsy fitovizan'ny trondro hang sy ny fitoeran-javatra
Ny fitoeram-bokatra plastika dia karazana fitaovana fitehirizana entina mitahiry faritra samihafa. Izy io dia manana ny toetra mampiavaka ny fanoherana ny asidra sy alkaly, fanoherana ny tasy solika, tsy misy poizina ary tsy misy fofona, mora diovina, mifangaro tsara ary mora tantanana. Araka ny bika aman'endriny, ampiasao ny fotoana, ny fahafaha-mitondra ary ...
Tranon-tahiry azo itehina, Fametahana fitoeram-bokatra, Bins fitehirizana plastika azo stackable, Tavoahangy plastika mifatotra, Fametrahana fantsom-pifidianana, Stack & Hang Bins,